Istaraatiijiyad «Raac Lacagta» Ka Ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyad fudud «Raac Lacagta»
Bilowga, ka fekeraya sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah , waxay u dejiyeen tilmaamayaal badan, fallaaro iyo digniino jaantuska ah. Macluumaad badan ma hagaajiyo natiijooyinka. Qalab fudud ayaa ku filan faa iidada xasilloon sida ku jirta istaraatiijiyada «Raac Lacagta».
Parabolic SA R. Go'aami jihada isbeddelka muddada-gaaban iyo muddada-dhexe. Dhibcaha tilmaamuhu way ka hooseeyaan qiimaha waana la hagaajiyay - waa kor u kac. Qiimayaal sare oo hoos loo jiheeyay - hoos u dhac.
Donchian Channel (DC) - jihada jiifka ah ee xariiqyada DC waxay xaqiijineysaa jiritaanka guri, burburka khadadka dhexe wuxuu noqon doonaa calaamadda binary ee dhamaadka. Haddii baaxaddu ballaadhan tahay, waad furi kartaa xulashooyin aad dib uga laaban karto xuduudaha. Habkani waxaa lagula talinayaa oo kaliya ganacsatada qibrada leh !
Wareeg . Tilmaamuhu wuxuu ka kooban yahay laba sadar oo muujinaya jihada iyo xoogga isbeddelka. Marka la eego, khadka kore (viPlus) waa cagaar, hoos u dhaca (viMinus) waa casaan. Khadadka kore wuxuu muujinayaa isbeddellada hadda ka socda suuqa. Billowga gurigu wuxuu noqon doonaa isku xirnaanta khadadka sida "Alligator" oo ay ku xigi doonto dhaqdhaqaaq siman.
Tilmaamaha Donchian iyo Vortex-ka kuma jiraan saldhigga aasaasiga ah ee ganacsiga binary. Laakiin si fudud ayaa bilaash looga heli karaa internetka. Xaaladdeenna, kani waa dillaalka PocketOption .
Options Ganacsi signalada:
WAC (UP) - ikhtiyaar . Qiimuhu wuxuu ka sarreeyaa P-SAR iyo khadka dhexe ee Donchian. On Vortex, khadka viPlus wuxuu ka sareeyaa khadka viMinus - waxaa jira iibsadayaal kor u kaca suuqa.
PUT (Down) - doorasho . Ka soo horjeedka calaamadaha gawaarida gawaarida : Qiimaha ayaa ka hooseeya khadka dhexe ee Parabolic iyo Donchian. Vortex wuxuu muujinayaa xukunka iibsadayaasha - viMinus ayaa ka sarreeya viPlus.
Fur ganacsi shumaca xiga kadib ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo bilaash ah. Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa inuu ka yaraan 15-20 daqiiqadood xitaa haddii waqti shaqeed ahaan la doorto 5 daqiiqo, sida fiidiyowgeena .
Ku xoqidda istiraatiijiyada suuqa cryptocurrency waxay u baahan tahay tijaabo hordhac ah. Halkan, isbeddellada suuqa ee is-weydaarsiga way ku kala duwanaan karaan muddada. U beddel waqti cayiman oo 30 daqiiqo ah, halkaas oo calaamadaha binary ee crypto ay yihiin kuwo lagu kalsoonaan karo.
'Cidhiidhiga' Kanaalada Donchian, waxay u badan tahay suurtagalnimada dhaqdhaqaaq xoog leh ka dib dhammaystir buuxa. Xaaladda ka soo horjeedda ayaa lagama maarmaan u ah ganacsiga cirifka xudduudaha: marinku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 30-40 dhibcood, haddii kale, ikhtiyaarrada ayaa noqon doona mid aan faa'iido lahayn, xitaa haddii barnaamijyada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ahi ay muujiyaan jihada saxda ah;
Waqtiga dhicitaanka waa la kordhin karaa ilaa 7-10 daqiiqo haddii isbeddelka joogtada ah la arko. Sidoo kale inta lagu jiro xilliyadaas oo kale, waxaa suurtagal ah in la furo dhowr ikhtiyaar oo leh waqtiyo kala duwan oo ansax ah si looga qaado ugu badnaan dhaqdhaqaaqa halista ugu yar. Haddii dallaalku fursad u siiyo inuu xiro ikhtiyaarka illaa uu dhacayo, markaa hubaal waxaan hagaajineynaa macaamilka (xitaa haddii faa'iido tahay!) Soo bixitaanka calaamadaha ganacsiga ee ka soo horjeedda!
Kama ganacsaneyno soo saarista wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka. Falanqaynta farsamada ayaa joojineysa shaqeynta, ikhtiyaarrada binary ee nuqul calaamadaha ganacsiga waa been.
Aan soo koobno . Istaraatiijiyadda intraday « Raac Lacagta » waxay u taagan tahay nidaam lagu kalsoonaan karo oo ah xagjirnimada muxaafidka ee ganacsiga suuqa xasilloon. Halbeegyada qalabka ganacsiga waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelka hadda jira. Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa in calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo faa'iido badan leh ay ku koobnaan doonaan oo keliya meelaha isbeddelka, inta lagu jiro xilliyada fidsan ee aan ka maqanahay suuqa!